Chii chinonzi vatengi vatengi cheCorte Inglés | ECommerce nhau
Corte Inglés vatengi
E-commerce kana zvemagetsi zvemabhizimusi ndeimwe yeakakura hunyanzvi muhunyanzvi hweruzivo huri kufambisa hupfumi hwezvikamu zvakasiyana zvevagari kutenderera pasirese. Inosanganisira zviitiko zvinoverengeka zvebhizinesi, senge kugovera, kutengesa, kutenga, kushambadzira uye zvigadzirwa zvekuisa masevhisi kuburikidza neinternet uye muenzaniso wakanakisa ndeye Corte Ingles vatengi.
Zviri nenzira iyi kuti zvitoro uye nzvimbo dzekutengesa dzakachinja izvo kare zvaigona kungowanikwa munzvimbo dzakakura nenzvimbo dzekutengesa dzakadai Dare reChirungu, kuti tigone kuwanikwa izvozvi pachiratidziri chemakomputa edu, zvichitipa nzvimbo yekutsvaga zvigadzirwa zvatinoda kungobaya chete.
Chaizvoizvo, sechikamu chemidziyo mitsva yekutengesa, inomuka El Corte Inglés, boka rekuparadzira reSpanish iyo inoumbwa nemakambani akasiyana siyana anopa ese ese zvigadzirwa uye masevhisi, kuburikidza nemadhipatimendi ezvitoro ayo akanyoreswa papuratifomu iyi.
Nenzira iyi, kupinda peji reEl Corte Ingles Tichakwanisa kuwana huwandu hwakawanda hwemabhizinesi uye nzvimbo dzinopa marudzi ese ezvinyorwa. Saka tinogona kuwana, kubva pane hombe sarudzo, shangu uye zvishongedzo, kune zvemagetsi zvinhu uye zvichena zvinhu, kana isu tinogona kunyange kuita grocery kunotenga.
Nemutengo wakakura kudaro wekutengesa, zvakajairika kuti ese marudzi ekusahadzika kana mibvunzo inomuka yakatenderedza akawanda ezvinyorwa nemasevhisi anogona kuwanikwa muEl Corte Ingles, uyezve zvinokwanisika kuti kumwe kunyunyuta kunosimudzwa nekuda kwenhamba huru ye kutenga uye maitiro ekutengesa anogadzirwa zuva nezuva papuratifomu. Neichi chikonzero, peji rino rine rinoshanda basa revatengi system iyo inopa kuraira, ruzivo uye rutsigiro kune vese vatengi vanogona kuunza chero kusahadzika, kunyunyuta kana zano nehutungamiriri hwepuratifomu.
1 Ko iyo yeChirungu court Customer Service ine chii?
2 Mutsetse wekubatsira uye neruzivo rweDare reChirungu
3.1 Imwe yeiyi misoro yakarongeka nenzira yekuti isu tinogona kuwana yakatarwa rubatsiro kune kumwe kusahadzika.
4 Maitiro ekubata vatengi
4.1 Taura neruzivo rwekunyunyuta uye / kana zvirevo
Ko iyo yeChirungu court Customer Service ine chii?
Kuti uwane nzira uye maturusi ekuwana ruzivo uye kugadzirisa zvichemo nekujekeswa nekukurumidza uye nyore sezvinobvira, Zvemari El Corte Inglés EFC, SA, ine inoshanda sisitimu yebasa revatengi iyo ine chisungo chekupindura kusahadzika kwese nemibvunzo iyo vatengi vane mumhando dzakasiyana dzekutengesa dzinobatwa pachikuva ichi.
Saizvozvowo, Dare reChirungu rine zvakare basa rekutanga rekugadzirisa zvichemo uye / kana zvichemo zvingamuka, mukati memwedzi isingasviki mwedzi miviri, mushure mekunge chichemo chagadziriswa nenzira inoenderana nezvinopihwa ne Mitemo yeKudzivirirwa kweMutengi weFinanciera El Corte Inglés EFC, SA
Muchiitiko chekuti dambudziko hombe remutengi risina kugadziriswa, kuti pane kusawirirana nemhedzisiro yakapihwa, kuti inopfuura mwedzi miviri yapfuura mushure mekunyunyuta kwekutanga uye / kana chikumbiro chaendeswa, uye chero mitsara yese yashandiswa sevhisi iyo inogona kupihwa nevatengi nzvimbo, anenge achitsvaga anogona kuenda kuClaims Service yeBhangi reSpain. Nekudaro, zvingangoita kuti uyu wekupedzisira mutsara wechiito haufanire kudikanwa, nekuti nekuda kwemhinduro dzakawanda dzakapihwa ne Corte Inglés Vatengi Sevhisi, vanozvida havakwanisi kuwana mhinduro yekupedzisira yavanogutsikana nayo.
Mutsetse wekubatsira uye neruzivo rweDare reChirungu
Kuti ugamuchire rumwe ruzivo, pamwe nezano rinoshanda zvakanyanya, El Corte Inglés inopa miviri mikuru yekushandira vatengi, nechinangwa chekupa yakanyanya uye yakasarudzika rubatsiro kune vatengi uye vashandisi vakasiyana vanoshandisa chikuva. Nekudaro, zvinoenderana nerutsigiro neruzivo runodiwa, rubatsiro runogona kukumbirwa kubva kune maviri akasiyana mitsara yebasa:
Yekutanga yakanangana chete nenyaya dzese dzine chekuita ne e-commerce sevhisi, kuitira kuti vashandisi vatenge nekutengesa pasina zvinetswa.
Waunogona mazuva makumi matatu nemazana matatu nemashanu pagore.
Ipo yechipiri ichigadzwa kugadzirisa kusahadzika kwese nezve chimiro uye mashandiro eDare reChirungu, senge nyaya dzine chekuita nenzvimbo dzekutengesa nemamwe makambani eboka.
Iwe unokwanisa mazuva makumi matatu nemazana matatu nemashanu pagore, panguva dzebhizinesi maawa.
Nekuda kwenhamba huru yekutenga nekutengesa matanho anobatwa muEl Corte Inglés, nharembozha yekutengesa magetsi inopa rutsigiro neruzivo mune chimwe nechimwe chezvikamu zvine chekuita nemaitiro ekutengesa kwechigadzirwa kana sevhisi., Kubva ku ruzivo rwekuti ungatenga sei, kusvika panguva yatino gamuchira zvakanzi kutenga mudzimba medu. Saizvozvowo, isu tinogona zvakare kuraira pane chero kusahadzika kana kusagadzikana kunogona kubuda kubva pakutanga kusvika kumagumo ekutengeserana.
Nekudaro, iwo ruzivo rwunopihwa muchikamu chino rwakakamurwa muzvinhu zvinotevera.
Maitiro ekutenga: Iko kwauchazopihwa rairo yekusarudza chinhu, wedzera icho kune yako yekutengera ngoro, uye gadzirisa odha nenzira yekubhadhara yaunofarira kupinda. Kana iwe uine kusahadzika nezve maitiro, zvinopihwa zvakare mukana wekutenga chero chinhu papuratifomu nerunhare, nekufona nhamba: 902 22 44 11.
Maitiro ekubhadhara: Mirayiridzo yekubhadhara nemakadhi echikwereti kana echikwereti, makadhi echipo kana makadhi ekutenga eEl Corte Inglés anozoratidzwa pano. Saizvozvo, iwe zvakare uchakwanisa kuona ruzivo nezvebhadharo yemwedzi nemwedzi pasina mubereko uye nenzira iyo izvi zvingaitwe zviri pamutemo zvichienderana nemari yekutenga.
Kutumira: Muchinhu ichi unogona kuona zvese zvine chekuita nemamiriro ekutumira, ayo anoenderana nenzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo, senge:
-Peninsula Spain neBalearic Islands
-Canarias, Ceuta uye Melilla
Guarantee nekugadziriswa kwezvikumbiro: Ichi chikamu chiripo kuti ubvunze ruzivo rwakakosha kuti usimbise vimbiso yezvinyorwa zvine dambudziko.
Kudzoka: Pano iwe unogona kuona iyo ruzivo kuti udzorere zvakashata zvinhu kana izvo zvausina kugutsikana nazvo. Izvo zvakakosha kuti uongorore chikamu ichi kuti uzive iwo akanyanya mazwi ekuita kudzoka, zvinoenderana nerudzi rwechinhu kunyanya.
Nzvimbo yemusika: Ruzivo pamamiriro ekutumira, nzira dzekubhadhara uye dzinodzoka nevatengesi vekunze vanopa zvigadzirwa zvavo kuburikidza neCorte Inglés chikuva chinoratidzwa pano.
Dhata yevatengi, mutemo wekuchengetedza: Chikamu chino chinotiratidza ruzivo rwekuti dunhu redu rinochengetedzwa sei, uyezve nzira yekuisa ruzivo rwedu kuvhura account yedu papuratifomu uye kuwana zvese zvirimo.
Mitero: Pano tichawana ruzivo rwakanangana nemitero inoiswa pamitengo yezvigadzirwa, zvinozove zvakasiyana kune vanogara muEuropean Union uye vagari venyika dzisiri dzeEU.
Taura nesu: Ruzivo rwekufambidzana ruchave ruripo pano kuti ugamuchire zano nechero mibvunzo kana zvichemo zvaunazvo nekushandisa chikuva.
Imwe yeiyi misoro yakarongeka nenzira yekuti isu tinogona kuwana yakatarwa rubatsiro kune kumwe kusahadzika.
Kune rimwe divi, kune rumwe ruzivo rwakadzama pane akawandisa mapoinzi, El Corte Inglés ane imwe nhare yekubatsira, iyo inopa rutsigiro uye kuraira mune yega yega yezvinhu zvinotevera:
Nzvimbo dzekutenga: Dhairekitori neMasevhisi
El Corte Inglés kadhi
Makambani eEl Corte Inglés Boka
Mashandiro eEl Corte Inglés
Nenzira iyi, kusahadzika kunogona kuendeswa kune yakasarudzika uye yakadzama mitsara yebasa, zvine chekuita nezvinodiwa chaizvo zvevatengi.
Maitiro ekubata vatengi
Kuti uwane ruzivo nezvebasa rekutenga papuratifomu, kana kuti uve neruzivo nezve chimiro chemirairo yakaitwa, vashandisi vanogona kubata runhare: 900 373 111, inowanikwa mazuva mazana matatu nemakumi matatu nemashanu pagore, kana vanogona kunyora email ku inotevera kero: customers@elcorteingles.es, kwaunogona kugamuchira mhinduro nekukurumidza sezvazvinogona.
Saizvozvowo, kuti uwane ruzivo rwakawanda pane zvese zvine chekuita naEl Corte Inglés, vatengi vanogona kufonera iyo Customer Service foni nhamba: 901 122 122, kubva Muvhuro kusvika Mugovera kubva 9:00 a.m. kusvika 22:00 pm, uye Svondo kubva 10:00 am kusvika 21:00 pm, pamwe neemail: servicioclientes@elcorteingles.es ichave iripo kune mameseji.
Taura neruzivo rwekunyunyuta uye / kana zvirevo
Kuti vagamuchire kutariswa pamunhu pamahofisi eFinanciera El Corte Inglés EFC, SA Vatengi Sevhisi, vatengi vanogona kuenda kukero inotevera:
Muridzi: Mr. Enrique Estebaran Sánchez
Ndichiri kutarisirwa kubva ku Zvikumbiro Service yeBhangi reSpain, ruzivo rwekutaurirana ndirwo runotevera:
C / Alcala, makumi mana nemasere
Claims Service Virtual Hofisi
Kuti uzive maitiro akazara akakomberedza kuumbwa kwezvichemo kana zvirevo, Financiera el Corte Inglés anoita kuti zviwanikwe kune vatengi, mune imwe neimwe yemahofisi avo mubazi, chinyorwa cheMutemo weDziviriro yeMutengi, chishandiso chinobvumidza ivo kukwidza zvichemo zvakanaka uye nezvibereko zvirinani.
Iyo Yevatengi Sevhisi yeFinanciera el Corte Inglés Yakagadzirirwa kugadzirisa chero mhando yekusahadzika ingamuka, kungave nezve kutengeserana kwepuratifomu, kurongeka kwayo kana zvichemo zvinogona kupihwa maererano nekushanda kwayo, pamwe nezvigadzirwa nemasevhisi anopiwa pano. Kuti uwane mhedzisiro yakanakisa kubva pachishandiswa ichi, zvakakosha kuti uende kumutsetse webasa wakakodzera, sezvo nenzira iyi tinogona kuvimbisa mhinduro yekusahadzika kana kujekeswa kwauinako maererano nekushandisa uye manejimendi papuratifomu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Email marketing » Corte Inglés vatengi
Zvinosuruvarisa, havataure, rombo rakanaka kana vakapindura, uye hapana chinoitika pano.
Tarisa uone kuti ndezvipi zvinhu, 4 zvirimo mudura mumutsara sechikonzero chechigadzirwa chisina kuunzwa
Manuel Garcia Paradela chigadziri chemufananidzo akadaro
Basa revatengi rinonyadzisa 17,01 euros yekufona kwekuferefetwa kwechikanganiso nedare reChirungu, iro rakati kunyadzisa chaiko.
Pindura kuna Manuel Garcia Paradela
Ndokumbirawo usataure kuti sevhisi inoshanda nemazvo, mwedzi mitatu kuti ubate, mushure mekufona kwakawanda, maemail asingaverengeke uye zvichemo zvitatu.
Kana ini ndikwanisa kubata uye kutumira ruzivo rwese zvakare, ini ndichakamirira mhinduro.
Zvinonyadzisa, takatenga CI online nekuda kwekuvimbika kwayakandipa uye kwave kutadza kuzere.
Zvinotyisa zvevatengi, unoita sei zvikumbiro? Kupi? Ndanga ndakamirira chinyorwa kweinopfuura mwedzi miviri chandakadaidzira kanopfuura ka6 kwandinowana kureba uye mhinduro inogara yakangofanana (Ndiri kuenda kunyunyuta), ndaneta kare ndinokumbira kutaura kune munhu anotarisira, anokumbira ruregerero uye oti usazvidya moyo mangwana, ndinomufonera ndisingazokundike ndimuudze nezvazvo vhiki rapfuura uye hapana anondibata, ikozvino kana kutenga kwacho kuri kubhadhariswa kubva pazuva rekutanga kuenda kuKuti kana paine kumhanya, ndinoenda kuchitoro chaiko uye vanondiudza kana kutenga kwacho kuri online handikwanise kutora ipapo, saka ngatione zvandinoita, ndichafanirwa kutora x bhangi reSpain? ?? KUNE KUNE KUTARISIRA KWAKANANZI KUKURU KAMPANI EL CORTE INGLÉS
Ndanga ndakamirira odha yemwedzi uye chinhu chimwe chete ichi chichiitika kwandiri, mafoni asina basa haazive mamiriro ehurongwa kana mune zvimwe zviitiko vese vanoshanda vakabatikana kwemaawa. Ini ndakatumira email kanopfuura mazuva gumi nemashanu apfuura pasina mhinduro. Handei kunyara. Ini ndangoisa chikumbiro pawebhu uye chinhu chimwe chete icho chingangoitika. Ipapo ivo vanoda kukwikwidza nechero magetsi ekutengesa chikuva ...
Pindura kuna CS
Mº Angeles Fernandez Thuillier. Kadhi 600833 0112468442/026 akadaro
Sei uchida kuti ini ndisiye chirevo changu, kuti ndiite zvakafanana zvawakaita nemaemail angu matatu kubva Zvita 26? Kunyarara zvachose. Imwe chete yekufona, pindura: vanoshanda vakabatikana, isu tichafona iyi imwechete foni. Ndichakangomirira. Ndiwo madzimambo ekunyarara.
Chandinonyatsojekesa nezvacho ndechekuti handisi kuzotenga chimwe chigadzirwa kubva kukambani iyoyo. Vatengi vanodzingwa mushure mekunge invoice yaunganidzwa. Kana kuti iwe wakamirira iyo Warranty pane iyo Dryer uye Dishwasher kuti ipere?
Ini ndinobvuma zvechivanzika mazwi, asi zvakavanzika kupfuura kunyarara kubva kwauri hazvipo.
Pindura Mº Angeles Fernandez Thuillier. Kadhi 600833 0112468442/026
Zvinonyadzisa kutarisisa, hapana nzira yekutaura, ini ndaisa chichemo changu kune vatengi uye hapana, ini ndakaita odha ndikatambira hembe, yatsvukiswa uye hapana nzira yekuvabata nayo, kana nefoni, kana neemail nekuti hapana munhu anopindura. Gentlemen kana iwe usingakwanise kuvimbisa vatengi, bvisa kutengesa x webhu
Mabatiro evatengi? zvinonyadzisa sei !!!!!! Pasina kuburitsa mazwi, matambudziko ako anopfuura kuburikidza nemukati memabhora ako, urombo, matambudziko ako. Ndakave nezvinetso zvemunhu uye zvebasa nekuda kwekugona kwake kugadzirisa zviitiko. Ini handizive kuti kangani ini ndadaidza, nemubhadharo wekuti izvi zvakakonzera ini, ini ndakatumira akawanda maemail, nanhasi havasati vagadzirisa chero chinhu. Ndiri kurwara neako "isu tichaendesa tsamba yako kubazi rakakodzera, ivo vachadzoka kwauri," uye SHIT. Ini ndakatsamwa zvekuti dai ndaive nemunhu ane basa rakadai risina basa pamberi pangu, handizive kuti chii chaizoitika.
Uye hapana chinoitika, mazuva, mavhiki, mwedzi inopfuura uye hapana chinoitika. Zvino iwe, semunhu asingakoshe anofa iwe, rega kubhadhara chimwe chinhu, kana usazadzise zvaunosungirwa uye uchaona kana vachakurwisa semhumhi dzine nzara.
Pamwe ndinogona kurega, kukanganwa nezvese zvinhu uye kuvarega vaite chero chavanoda, asi hazvibve pana dick yangu, zvakanaka, ndichaenda kusvika pazvinodiwa.
Muchidimbu, kushandira vatengi marara, zvinosemesa, hundi, tsvina, tsvina, tsvina, tsvina, nezvimwe.
Sonia Burgos akadaro
Manheru akanaka, ndaunganidza odha yandakapfigira, ndakumbira 1,5 kg yemabhanana nemari inosvika 2,84 uye mandipa 956 gramu yemari inosvika 1.
Naizvozvo, ivo vanofanirwa kudzorera mutsauko muhuwandu kuaccount yangu kana kuunza iwo mabhanana asipo kumba kwangu.
Nenzira, sevhisi inonyadzisa, iwe unopa yekudzvanya & mota yatinofamba nemota uye usinga buruke pairi, unoisa mabhora mutangi rekutenga kwese. Kunyepa
KUTI UNOZIVA NEMITENGO ZVAKANYANYA ZVAKADIKI KUPFUURA KWAKO MUZVINHU ZVAKAITIKA KUSVIKIRA iyo SUPERMARKET DIA INOPA YAKANAKA BASA.
Ini ndichadzokorora iyi meseji kubazi rako rebasa revatengi.
Pindura Sonia Burgos
Ndiri kukunyorerai nekuti ini hapana chandinoziva nezve odhiyo yandakaita musi waApril 10, chinhu chega chavakaita kunditumira nhamba yekuraja uye kuchaja muna Kubvumbi 15, vakandiudza kuti vaizotaurirana neni neemail hurongwa hwaienda Uye ini handisati ndaziva chinhu, ndinoda kuti iwe undiudze chimwe chinhu ndapota nekuti handisi kufara nemaitiro avanoita, iyo odha nhamba ndeye 2010180003979
Pindura kuna Celia
Celia Pena Amador akadaro
Ini ndinomirira mhinduro nekukurumidza sezvazvinogona,
Pindura Celia Peña Amador
NDINOVIMBA MHINDURO PASI POSE ZVINOGONESESA, SEZVAMUNOGONA KUTI MUDZIMURE MARI KUBVA MUNA ACCOUNT YANGU PANE GUMI NETE APRIL MWEDZI
Nehurombo, sevhisi sevhisi inotyisa. Hapana chekuita neyakanakisa kumeso-kumeso sevhisi. Ini handikurudzire kutenga pamhepo zvachose, zvirinani kumirira pane kuora mwoyo neako
e-commerce uye foni yayo isingabviri apo mutengi anoseka.
NDINOBVUMIRANA NEVANHU VOSE
Zvinonyadzisa kuti hazvibviri kuvabata nefoni kana kupindura maemail. Ndakatenga furiza uye ndanga ndichikumbira mhinduro kwemazuva gumi nemashanu. Ndokumbira undipe mari yangu kumashure uyezve ndichadzima El Corte Ingles kadhi uye handife ndakatenga pano zvakare.
Pindura kuna Justino
Iye Corte Inglés sevhisi yebasa haina HERE.
Ini ndatenga isina waya keyboard uye mbeva combo. Uye ini ndakawana iyo isina kukiya keyboard, nekuti akati wandei kiyi haashande.
Ndakaedza kutaurirana nebasa revatengi, munzira dzese dzavanokupa. Uye HAPANA ...
Mukupedzisira ndaifanira kutenga imwe mune chimwe chitoro chepamhepo.
Kushandisa kaviri pachigadzirwa chimwe chete.
Ndinovimba vanondidzosera mari yangu. Sezvo ini ndisingade chero shanduko….
Zvingave zvakanyanya, mushure mekufanirwa kutenga imwe.
MARIA MONTIEL akadaro
BASA REKUSHANDIRA KWEVATengi:
Nekuda kwekutyorwa kwechengetedzo mumakomputa avo ivo vatsemura account yevatengi yeEl Corte Inglés, ndichingozviona panguva ingangoita awa ndinoedza kuvabata kuti vataure mamiriro ezvinhu aya, uye kutamba kwenhamba dzesarudzo kunotanga kuwana zvinoenderana kune chiitiko chipi, vashandi vasingakwanise kundibatsira uye vasingagumi kufona vese vanobhadharwa kubva kune nharembozha, yakazara kupfuura gumi nemana euros mukufona uye handisati ndagamuchira iyo email iyo yaifanirwa kunditumira ine nhamba yechiitiko uye kunyoreswa kuregererwa kwekutenga kwakaitwa nehunyengeri mukuwedzera pakusagamuchira chero nhare kana kutaurirana nezvekuti ndigone sei account yangu uyezve kuti ndikwanise kumhan'ara kumapurisa ndinoda email yekusimbisa yechiitiko ichi.
CHINONYADZISA KUTI VANOTSIGIRA VAMWE NEIYO IECISA KAMPANI uye VANOSHAYA ZVAKANAKA KOMPUTERI DZIDZISO KUDZIVIRIRA DZEDZA REDU PAMWE NEZVIMWE ZVAKANAKA ZVEDU ZVEMA BHANGERI.
Pindura MARIA MONTIEL
* ASI ANOGONA
isabel altayo akadaro
Supercor paCalle General Oraa pakona yaDiego de Leon, magurovhosi uye gel zvinonunurwa pamusuwo. Yakanaka kwazvo kuziviswa nekuti ipapo mushandi ane muchina anoenda kundotarisa masheya uye asina magirovhosi achiaisa patsva. Paakabvunzwa kuti sei asingashandisi, anopindura kuti ane allergies uye akaregererwa pakuapfeka
Mubvunzo: Haugone here kuita rimwe basa kunze kwekubata zvigadzirwa?
Ini ndinoenderera mberi uye ini ndinoona anofungidzirwa mushandisi asina magurovhosi achivhura iwo ekuratidzira makesi uye uyo anotaura zvakanyanya kujairana nemushandi ataurwa nezvake uye anoenda kubhegi kuti apfuure chigadzirwa.
Ini ndinobvunza munhu anopa magirovhosi pamusuwo kana ari ekumanikidza kune wese munhu uye anofungidzirwa mushandisi anotora zano uye oti iye mushandi ,,,,, zvakanyanya chikonzero mumaonero angu kuti atore magurovhosi. Ini ndinobvunza muchengeti wemari kana ndichigona kuita chikumbiro uye vanofonera maneja uyo asingaoneke kanoverengeka pamusoro peiyo kero yeruzhinji. Ndinofanira kurega.
NDINOFUNGA KUTI AIVA ANOGADZIRA ANOFANANA WAKACHINJA PASINA GLOVES IS SLIM AND BRUNETTE
DZIMWE EMPKEADA / mutengi. Zviri pachena. : bvudzi pfupi rakaveurwa, kuvaka kwakasimba uye maoko akanyorwa nyora
Uye magurovhosi kubva pakutanga.Ndinovimbisa rukudzo kuvashandi uye vanobhadhara mari
ZVINONYANYA KUTI KWANGU KUTI MUTUNGAMIRIRI WOKUVIMBISA ASATETE MITEMO
Pindura kuna Isabel altayo
Maria Elisa Brea Guerra akadaro
Ini ndinoita zvese zvirevo zvevatangiri vangu, asi ikozvino ndirikunyanya kutaura kune muprinta wandakatenga musi wa09 / 05/2020 uye vanga vachirwa kwemazuva maviri avanoendesa kwandiri uye kekupedzisira nhasi vanondiudza iyo cercedilla harisi iro basa remrw uye kuti saka vazvisiya muchitoro. Zviri kuitika kwandiri zvinoita sezvisingagamuchirike kwandiri kuwedzera kunonoka kwemazuva maviri mumba mangu ndakamumirira kuti asvike uye nhasi ndaona kuti hapana anoziva chinhu, ndinodaro uye pamwe ndiri chokwadi kuti iye wemuchitoro aifanira kunge akafona ini ndichindiudza iyo nyaya. chinzvimbo cheangu odha, nekuti hazvina kudaro uye pano ndiri pasina chandinoziva. Ndinofona panhare iyi 901122122 uye senge ari kuinzwa ichinaya vachandifonera asi havandiudze mumwedzi upi kana muvhiki ipi. Pano ini ndichakamirira kufona.Ukatarisa kadhi rangu uchaona kutenga kwandinoita, ndiri kuzomanikidzwa kuchinja mupi. Ndakaedza pane peji rako rekutengesa repamhepo kuti ndichinje zip zip uye handina kurisiya, handina kuripa kukosha nekuti mamwe maodha akauya kwandiri nekodhi isiriyo, asi panguva ino ndinofanirwa kunge ndawana munhu asingatarise chero chinhu .kana vane moyo munyoro Ndapota pindura nekukurumidza nekuti kana zvikasadaro ndinotenga purinda kubva kune imwe saiti uye pandinowana yako, handizoitora ndigozoendesa murume wekuendesa. Ndinochida kuti chishande uye kana zvisiri ndichaenda kumutsetse wevanoshaya basa pamwe nemamirioni evaSpanish vasina basa, mwanakomana wangu anoshanda pamba.
Pindura kuna maria elisa brea guerra
RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ akadaro
Kutaurirana newe kune njodzi, kusvika pokuti NDISINGATENGE kutenga kwavari online zvakare, yekutanga uye ine njodzi
Pindura RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ
Adela Lazkano Goitia akadaro
Ndakakumbira lounger yandisingade zvachose nekuti haina kugadzikana, yaive panguva yekuvharirwa, ndinoda kuidzosa uye hapana nzira, ndinofona uye vanokusiya pafoni sekureba kwaunoda mumhanzi uye iwe unongorembera kunze kwekufinhwa, zvinonyadzisa NDINODA KUDZOKA LA TUMBONA, ndinoda kuti undiudze chimwe chinhu, chekubhadhara chii tinobhadhara, kana mumwe munhu akaverenga iyi komendi ndinovimba anondifonera, ndiri kuruma.
Pindura kuna adela lazkano goitia
Ndanga ndiri mutengi weEl Corte Inglés kwemakore makumi mana nemana, handisati ndambove nematambudziko, asi kwemwedzi misere, zvese zviri matambudziko, kutariswa kwakashata mumunhu uye kana zviri zvefoni, kuzvidza kuri kuenderera, uye nguva dzekumirira kwavari kuenda kwauri vanogara vachidarika makumi maviri nemashanu maminetsi.
Chandiri kujekesa ndechekuti vashandi vari kuramwa kambani uye vatengi vanobhadhara izvo.
kushandira vatengi chitsotsi nedare reChirungu. Havatore foni zvachose, hapana anopindura. Unogona kuichengetedza. Ndanga ndichifona kwemaminetsi makumi mashanu nemashanu uye hapana mukana wekuti vatore foni. Kuisa kufona kuMalaga switchboard, vanondipfuudza kune dhipatimendi rekushandisa zvemagetsi uye… nei ??? zvakare pasina, hapana anopindura, ndadaidza kanokwana kagumi. Nefarious English basa redare nevashandi varo vanokwenya matumbu avo kana kutamba Parcheesi panguva dzekushanda. Ndanga ndakamirira mangwanani ese kutakura firiji uye havasati vafona kana kuziva chero chinhu. Zvekunyara.
AHMAD ABOUKAMAR akadaro
Chichemo changu ndechechimwe chimiro sezvo zvakavakirwa pachokwadi chekuti Dare reChirungu rakandiisa pamazita evanotadza kudzoserwa 182,… maeuro pasina kuve iye akatenga kana kuti akati kudzoreredza, kuve muridzi we account uye wangu EX-mukadzi anga aine imwe kadhi kubva kuaccount imwe chete, uye patakaparadzana, akandisiira iyo PÚA kunyangwe kadhi neakaundi yacho zvaive muzita rake asi ndiri iye mubati weakaundi yedare reChirungu. ini…. Kukonzera kukanganisa kumufananidzo wangu uye CREDIT yangu padanho remabhangi uye inshuwarisi izvo izvozvi haugone kufungidzira kukuvadzwa kwandakaitwa izvi zvese, ini handikwanise kusarudza mune chero bhangi kadhi rechikwereti, kana inishuwarenzi yavanoda kugadzira ini mutemo wemhando ipi neipi yeinishuwarenzi… .etc.
Kana hupenyu hwangu hwese kubhadharwa uye nhoroondo yechikwereti yave uye ichiramba isina kana chainopomerwa, ndosaka ndiri kunyora pano kuti ndione kana iwe ukandibatsira kuti ndipedze kubuda kweropa, ndichitenda kupesana neruoko chero rudzi rwerubatsiro kubva kwauri, pasina kuenderera mberi, maererano.
Pindura kuna AHMAD ABOUKAMAR
Albert perez akadaro
Att isingafadzi vatengi
Ivo havapindure foni uye havadzore mafoni, hazvigoneke kuziva kuunzwa kwechigadzirwa uye kwete pavachatora kudzoka kweumwe wekuendesa mune anotyisa mamiriro ekupakata.
Ichokwadi ndechekuti ruzivo ne e-commerce yeEl Corte Inglés haisi yekuishandisa zvakare, iwo makore akareruka kure neAmazon yeavo vanozvirumbidza kuti vanoda kuve kwavo compendia
Vatariri vavo vane zvakawanda zvekudzidza, zvakawanda ...
Kubva pane manejimendi ake anotyisa, hazvishamise kuti vari kuvhara nzvimbo, chinotevera, e-commerce chiteshi, asi, nguva nenguva
Ini handichatengi muchitoro ichi
Pindura kuna Albert Pérez
Maitiro ekuronga emahara tweets pa Twitter
Shandisa Google makosi ane chekuita neEcommerce